Lixda saxiixayaasha oo maanta ku kulmaya Nairobi si ay halmushrax isaga soo saaraan
News Warka Lixda saxiixayaasha oo maanta ku kulmaya Nairobi si ay halmushrax isaga soo saaraan	Sunday, 05 August 2012 07:58	Wararka ayaa ku waramaya in kulanka maanta saxiixayaasha ay yeelanayaan ujeedkiisa uu yahay in 10 Augusta ka hor la diyaariyo xubnaha baarlamaanka cusub ee imaan dooni si ay usoo doortaan guddoonka baarlamaanka cusub.
Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in saxiixayaasha qaarkood ay rabaan in la'isku tanaasulo islamarkaana hal musharax halkaasi laga soo saarayo oo matala kuwa kale.
Ambasador Mahiiga ayaa la sheegay inuu saxiixayaasha u sheegay in looga baahan yahay in doorashada soo socota ay ku dhacdo si nabad ah islamarkaana aysan ka dhicin wax carqalad.Maanta ayaa lagu wadaa in markale ay magaalada Nairobi kulan kuyeeshaan saxiixayaasha Road map-ka.
Wararka ayaa ku waramaya in kulanka maanta saxiixayaasha ay yeelanayaan ujeedkiisa uu yahay in 10 Augusta ka hor la diyaariyo xubnaha baarlamaanka cusub ee imaan dooni si ay usoo doortaan guddoonka baarlamaanka cusub.
Ambasador Mahiiga ayaa la sheegay inuu saxiixayaasha u sheegay in looga baahan yahay in doorashada soo socota ay ku dhacdo si nabad ah islamarkaana aysan ka dhicin wax carqalad.
Written by Diirad News Desk-Somalia	Related Articles